トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul zvinhu (pakuonekwa uye yomukati pamusoro) uye sei kuwana?
mapatya Seoul kuwana [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi ari mamiriro zvakanga pakutanga mumwe mweya inokamukana umo kupinda maviri, ndizvo chii saka kutaura, zvakadai hafu muviri. Kashoma kusangana ichi mapatya mweya, asi kana iwe unogona kusangana kana, achapiwa akarwiswa chinoshamisa kunzwa kubva iyoyo.
uye sezvo kuramba ukama nevamwe webato, yandichatuma kuti kuenda ravira hapana akanga achinzwa pamberi. Kana mapatya uye Seoul uyewo chikamu synchro uye wako nechitarisiko uye yomukati hukawanika, kunewo akasiyana zvachose chikamu. Kana vachisundira
avo features, vanhu vari akasangana ikozvino mapatya Seoul zvichakubatsirai Ikeru mberi pave mweya kuva mumwe chete, vanhu kusangana kubva zvino vava nyore kuwana ayo kuvapo Xiang.
mapatya mweya zviri uye sei kuwana, muna
ari nokusimbisa nzira Saka ndezvipi zvinhu uye sei kuwana inowanikwa mapatya mweya. Sezvo
mapatya Mweya kwazvo mwoyo paakasangana
? ndiyo ishamwari yake pakutanga, uye mumwe kwazvo kukwezvwa patakasangana kokutanga. Kunzwa akafanana rudo pakutanga kuona, asi inogona kuonekwa sechinhu chinokosha pamberi mukati pachangu kwete rudo.
? zvazvingava synchro zvakakwirira
mapatya Seoul, ndizvo chaizvo kazhinji maitiro uye kufunga kuti synchro kuti aiva mumwe pakutanga. Kana mukana akamhanyira pandinofunga rimwe bato, kana akanga ari kumhanya ari kudya uye kukurukura ndiwo chete, zvakadai kana kufunga chinhu chimwe panguva imwe chete, incredible synchro zvinoitika mumwe pashure perimwe.
? unhu mapatya mweya kuti munoziva akasiyana kazhinji
1 mweya chete, unhu ane ane mufananidzo simba kuti akafanana, chokwadi ndechokuti kazhinji zvinopikisana. chete Uyewo kubva siyana uyewo vakakura zvakatipoteredza, kuvapowo sawirirana nhengo. Zvisinei, mumwe chikabviswa inogona kugamuchira wavatorwa kunyange panguva mugove.
mapatya mweya, dzimwe nguva kuti vadzivise nguva, asi iwe rudo zvikuru kuziva mumwe, uye kuti unhu Zvakasiyana, kuti kunzwa inowedzera kuti havadi kurasikirwa bato kubva takambosangana napo, zvinogona dzinga mumwe panguva. Also zvakakwanisika kuti ndaravira marwadzo akadaro kusiyana mweya naye, kwaizova chepfungwa mapatya mweya ukama.
? Kune hapana mumuviri hazvirevi kuti pane vazhinji
kunopindirana tarirai-zvakafanana kuti kufanana, asi chinoremedza kuti vamwe dzemiviri akafanana. Somuenzaniso, maoko uye netsoka chimiro, vamwe zvikamu chiso, akafanana nhuta kana rupawo pane nzvimbo. Uyezve, iwe nyaya runogonawo kuoneka kuti zvakafanana muitiro bvudzi.
wo ikoko asi vanoda
mapatya mweya zvinhu kukurira matambudziko, ichava chinotiudza huru kana kuti kuwana kuti munhu. The ukama pakati vanhu maitiro aya zvakare zvinorwadza kuti panguva iyoyo, asi zvakakosha kuti pamusoro payo kuenda mumwe zvinomutsa mumwe.
Zvakajairika kuti zvimwe dzemiviri akafanana. Somuenzaniso, maoko uye netsoka chimiro, vamwe zvikamu chiso, akafanana nhuta kana rupawo pane nzvimbo. Uyezve, iwe nyaya runogonawo kuoneka kuti zvakafanana muitiro bvudzi.